Dulmarka Guud ee Xarumaha Bulshada - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Kaabayaasha Dhismaha|Guudmarka Xarumaha Bulshada
Miisaaniyadda Raasamaalka Washington ee Shaqeysa Beeshaada
Kama fikiri kartid Waaxda Ganacsiga marka iskuulkaagu helo nidaam cusub oo HVAC ah si loo hagaajiyo raaxada loona kaydiyo kharashaadka kululaynta. Ama markii xarunta weyn ee xaafadda la ballaariyo. Ama dhisme magaalada dhexdeeda ah ayaa dib loo horumariyey si loo siiyo guryo la awoodi karo oo leh xarun xanaano maalmeed iyo qolal tababar, oo dhammaantood ku yaal meel u dhow gaadiidka dadweynaha iyo beeraha nasashada Qaar ka mid ah shaqadeena ugu muuqata waa natiijada deeqaha qaab-celinta ah ee aan siino dawladaha hoose iyo ururada aan macaash doonka ahayn si ay uga caawiyaan bulshooyinka inay dhisaan oo ay horumariyaan xarumo badan oo dawladeed si loo daboolo baahidooda iyo himilooyinkooda. Dhammaan barnaamijyadan waxaa lagu maalgeliyaa iibinta curaarta gobolka. Maalgalintu waxay bulshada ku gaaraysaa dhowr barnaamij oo deeqo tartan ah ama mashaariic raasumaal ah oo ay soo bandhigeen Gudoomiyaha Gobolka ama Sharci dejinta.
Dhismaha Maalgelinta Bulshada
Deeqaha gobolka waxaa heli kara ururada aan macaash doonka ahayn, ururada ku saleysan bulshada si ay u bixiyaan kharashaadka raasumaalka ee u qalma si ay u helaan, u dhisaan, u dayactiraan ama u dayactiraan xarumaha aan deegaanka ahayn iyo xarumaha adeegga bulshada.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Sanduuqa Dhismaha Bulshada…
Laga soo bilaabo 1991, gobolka ayaa abaalmarino abaalmarin ah ku siiyay farshaxanka waxqabadka aan faa'iido doonka ahayn, matxafka farshaxanka iyo ururada dhaqanka.
2019-2021 Dhismaha Liiska Liisaska Farshaxanka
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Dhismaha Farshaxanka…
Xarumaha Madadaalada Dhalinta
Deeqaha gobolka waxaa heli kara ururada aan macaash doonka ahayn si ay uga caawiyaan leexinta kharashaadka raasumaalka u qalma ee soo iibsiga, dhismaha iyo cusbooneysiinta xarumaha madadaalada dhalinyarada aan deegaanka ahayn.
2019-2021 Xarumaha Madadaalada Dhalinta Liiska Liiska
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Xarumaha Madadaalada Dhallinyarada…
Barnaamijka Xarumaha Waxbarashada Hore
Ganacsigu wuxuu soo saari doonaa deeqo raasamaal ah iyada oo loo marayo nidaamka tartanka degmooyinka K-12 iyo hay'adaha u qalma si loo abuuro tasiilaad waxbarasho oo hore. Barnaamijka Xarumaha Wax Barashada Hore wuxuu taageeraa ballanqaadka Washington ee horumarinta fursado waxbarasho hore oo tayo sare leh oo loogu talagalay carruurta dakhligoodu hooseeyo.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Barnaamijka Xarumaha Wax Barashada Hore…
Xarumaha Caafimaadka Habdhaqanka
Deeqahani waxay gacan ka geystaan ​​bixinta kharashka dhismaha iyo qalabka si loogu taageero xarumaha caafimaadka hab dhaqanka cusub ama la aasaasay, sida sariiraha bukaan-jiifka ee isbitaalka bulshada, qiimeynta iyo daaweynta bilaashka ah, kala-soocidda iyo xarumaha xasilinta dhibaatooyinka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Xarumaha Caafimaadka Habdhaqanka…
Mashruuca Sharciga Habka Caafimaadka Habdhaqanka
Phone: (360) 688-0041
Xarumaha Xarumaha Bulshada Cusbooneysiinta Emailka